बंगलादेशले पैँचोमा दिने भनिएको मल कहिले आइपुग्छ ?:: Naya Nepal
बंगलादेशले पैँचोमा दिने भनिएको मल कहिले आइपुग्छ ?
२० असोज, काठमाडौं । एक महिना अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बंगलादेशकी समकक्षी शेख हसिनासँग नेपाललाई खाँचो परेको भन्दै ५० हजार मेट्रिकटन मल पैँचो मागे । बंगलादेशकी प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक जवाफ दिएको प्रधानमन्त्री ओलीले सोही दिन ट्वीटरमार्फत जानकारी दिए ।
तर बंगलादेशले पैँचोमा दिने भनिएको युरिया मल अझै आइपुगेको छैन । बंगलादेशबाट मल ल्याउन टेण्डर हात पारिसकेको यूएईको कम्पनी पनि सम्झौता गर्न आएको छैन ।
त्यसैले मल आउन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ । झन्झटिलो टेण्डर प्रक्रियाका कारण मल आइपुग्ने मिति अझै एकिन हुन नसकेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ ।
बंगलादेशबाट मल ल्याउनका लागि छोटो ग्लोबल टेण्डर गरिएको भनिए पनि प्रक्रिया अझै सकिएको छैन । एक साताको समय दिएर आह्वान गरिएको टेण्डर यूएईको डेनट्रेड यूएई नामको कम्पनीले हात पारेको छ । तर सम्झौता गर्न कम्पनी नआएको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ ।
टेण्डरका लागि आवेदन दिएका पाँच कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम ८२.२४ डलर प्रतिमेट्रिक टनमा मल ल्याउने गरी उक्त कम्पनीको आवेदन परेको र ठेक्का सम्झौता गर्न आगामी शुक्रबारसम्मको म्याद रहेको कम्पनीका प्रबन्धक नेत्रबहादुर भण्डारीले बताए । ‘शुक्रबारसम्म ठेक्का सम्झौता हुने छ र कम्पनीले एलसी खोलेको बढीमा ७० दिनभित्र मल आइपुग्ने छ,’ भण्डारीले भने ।
मल ल्याउनका लागि कम्तीमा ८२.२४ डलर प्रतिमेट्रिक टनदेखि बढीमा १०५ डलरसम्मको आवेदन परेको उनले बताए । ढिलामा मंसिरको पहिलो सातासम्म मल आइपुग्ने र यसले तोरी तथा गहुँका लागि वितरण गर्न पुग्ने भण्डारीले बताए । कात्तिकमा छरेको गहुँ र तोरीलाई मंसिरमा र मंसिरमा छरेकोलाई पुसमा हाल्न युरिया मलको अभाव नहुने उनले बताए ।
सैलुङले माग्यो थप समय
धानमा हाल्ने गरी २५ हजार मेट्रिक टन मल युरिया नल्याएर कारबाही भोगेको शैलुङ इन्टरप्राइजेजले थप ३० हजार मेट्रिकटन युरिया मल ल्याउन नसक्ने संकेत देखिएको कृषि सामाग्री कम्पनीले जनाएको छ ।
मल शिपमेन्टको समय गुजारेको आयातकर्ताले मल ल्याउने दाबी गर्दै शिपमेन्ट समय थप गर्न माग गरेको कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक नेत्र बहादुर भण्डारीले बताए । ‘कागज पत्र हामीले मागेको छौँ, उसले बुझाएका कागजमा विश्वसनीय आधार देखिएका छैनन् । तर मल ल्याउन उनीहरुलाई ४५ दिनको समय छ हामी विचार गर्दै छौँ,’ भण्डारीले भने ।
गत असारमा भएको ठेक्का सम्झौता बमोजिम १०७ दिनमा मल नेपालमा ल्याइसक्नु पर्छ तर कम्पनीबाट जहाजमा मल पठाउने समय भने सैलुङले गुजारेको छ ।
कुल एक सय ७ दिनमध्ये अब बाँकी ४५ दिनमा मल ल्याउन सक्नेबारे कम्पनी पर्खेर बसेको कम्पनीले जनाएको छ । गहुँ, तोरी र तरकारीको लागि चाहिने ३० हजार मेट्रिकटन युरिया मलका लागि ग्लोबल टेण्डरमार्फत सैलुङले सस्तोमा ठेक्का हात पारेको थियो ।
दार्चुला ब्यास नगरपालिका १ छाङरुबासीलाई स्वदेशी भूमिको बाटो भएर जिल्ला सदरमुकाम आवत–जावत गर्न सजिलो भएको छ । नेपाली सेनाले घाँटीबगड–छाङरु गोरेटोरघोडेटो बाटो खनेर सोमबार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेपछि त्यस क्षेत्रका जनतालाई महाकाली वारी किनारै– किनार भएर आवत–जावत गर्न सुबिधा भएको हो ।
हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले जटिलपरिस्थितिमा पनि सेनाले उत्कृष्ट काम गरेको बताउनुभयो । उहाँले त्यस क्षेत्रको विकासमा सेनाबाट थप योगदान पुग्ने हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सुदूरपश्चिम पृतनापति निर्मलकुमार थापाले बाटो निर्माणमा सेनालाई सहयोग पु¥याउने प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सबैप्रति धन्यावाद ज्ञापन गरे। उक्त बाटो निर्माण गर्ने क्रममा स्थानीय देवानसिंह धामीको ढुङ्गा लागेर मृत्यु भएको थियो । सो अवसरमा बीमा बापतको रु १० लाखको चेक र योगदानको उच्च मुल्याङ्कन गर्दै प्रधानसेनापति प्रशंसा निशान उनकी पत्नी लक्ष्मी धामीलाई प्रदान गरिएको थियो ।
बाटो सञ्चालनमा आएसगैँ त्यस क्षेत्रका १८४ घरधुरीका १ हजार २५० जनालाई हिड्न र पशु चौपाय ल्याउन पु¥याउन सहज भएको जनाइएको छ । उक्त मार्गको तम्पाकु खण्डमा सजिलोसग आवत जावत गर्न केही कठिनाई रहेकाले त्यसमा पनि सेनाबाट काम होस भनी स्थानीयले अनुरोध गरेकामा महाकाली करिडोर (दार्चुला–तिङ्कर) निर्माणका क्रममा त्यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने सेनाले विश्वास दिलाएको छ ।
अति विकट भौगोलिक अवस्थाकाकारण हेलिकोप्टर र साहसिक सैनिक परिचालनबाट मात्रै छोटै समयमा निर्माण सम्भव भएको सेनाले जनाएको छ ।